Nepal Dayari | खुशीको खबर ! यसरी ४ वर्षदेखि बन्धी बनाइएकी नेपाली चेली नेपाल फर्कने खबर आयो,के रहेछ त वास्तविकता ?(भिडियो हेर्नुस्)
खुशीको खबर ! यसरी ४ वर्षदेखि बन्धी बनाइएकी नेपाली चेली नेपाल फर्कने खबर आयो,के रहेछ त वास्तविकता ?(भिडियो हेर्नुस्)
मंग्सिर १९, २०७८ आइतबार ५२१ पटक हेरिएको
चार वर्षदेखि कुवेतमा बन्धक जीवन बिताइरहेकी सृजना प्रजा अब नेपाल आउने भएकी छिन्।भिडिकल मार्फत बोल्दै उनले ए वान टेलिभिजनका पत्रकार अमृतमान ओली सँग कुरा गर्दै अब आफू नेपाल आउने तयारीमा रहेको बताएकी छिन्। साथै उनले मिडिया द्वारा आफ्नो उद्धारका लागि भएको सम्पूर्ण प्रयास र सफलताका लागि पनि आभार व्यक्त गरेकी छिन्।
उनले यस्तो अवस्थामा आफूलाई छोडेर जाने श्रीमानलाई अब नहेर्ने र उसँग नबस्ने पनि बताएकी छिन्।आफूलाई छोरीहरूकै बढी चिन्ता लागेको र उनीहरूको भबिष्यको लागि आफू बाँचिरहने पनि उनले बताएकी छिन्।यस्तो अवस्थामा पनि साथ नदिएको श्रीमानलाई अब साथ दिन नसकिने पनि उनले बताएकी छिन्।
सृजना प्रजा मकवानपुर जिल्ला मनोहरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा घर भइ वैदेशिक रोजगारको क्रममा आजभन्दा चार बर्ष पहिला कुबेतमा गएकी थिइन्। केहिदिन अघिमात्र उनी आफुलाइ चार बर्षदेखि एउटा घरमा ब’न्धक बनाइएको भन्दै आफ्नो दु’खे’सो पोख्दै भिडियोकल मार्फत मिडियाकर्मिसग जोडिएकी थिइन । मिडियाकर्मिसँग भएका उनका कुरा सुन्दा उनी निकै ठूलो सं’क’टमा रहेको हामिले बुझ्छौँ ।
दुई बर्षको लागि बिदेश गएकि उनलाइ दुई बर्ष पुरा भएपछी घर जान खोज्दा अझै तीन महिना पर्खी भनेको र त्यसपश्चात भने कोरोनाको कारण देखाएको बताएकि थिइन उनले । घर जान नपाउनुको पी’डा त छदै छ उनमा साथमा उनलाइ अनेक तरहका या’त’ना दिने कु’ट’पि’टसमेत गर्ने गरिदो रहेछ । उनि काम गरेको ठाउमा बच्चाहरु बि’रा’मी हुदा पनि उनलाइ गा’ली गर्ने गरेको कुरा पनि उनले बताएकी थिइन ।
अब त घर फर्किने आशा नै म’रि’स’केको बताउने उनको साथमा अहिले पासपोर्ट पनि छैन । घरमा बालबच्चाहरु छ्न, बुढी सासुआमा निकै समस्या परेको बताउथिन उनी । फोन ईन्टरनेटबाट समेत टाढा राख्छ्न उनलाइ, क’ठै ब’रा ! कु’ट’पि’टसहित अनेक ध’म्कि दिएर पुरै अ’धि’नमा राखेका रहेछ्न उनलाई । यसैक्रममा आज मिडियाकर्मी अमृतमान ओलि उनको घरको अबस्थाबारे बुझ्न उनको घरसम्म पुगेका थिए। आज भने मिडियामा सृजना छोरिहरुको साथमा उनका बाबुआमा पनि आएका छ्न ।
आमाचाहिले पनि छोरिलाइ सकेसम्म छिटो निकाल्न पाएहुन्थ्यो भन्दै चि’न्ता व्यक्त गरिन । मिडियाकर्मीसग हजुरहरुले केही गरेर उनलाइ नेपाल फर्काइदिए त धर्म नै हुन्थ्यो भनिन । क’ठै आमा आफ्नी छोरि पराइ भुमिमा यसरी अ’ल’प’त्र हुदा कस्तो होला एक आमाको मनमा । आफ्नी छोरिलाइ साहुसाहुनीसग धेरै मुखमुखै नलाग्नु भन्दै सम्झाइन उनले ।
आफुलाइ छोरी छिटो आइदिओस जस्तो लाग्छ भन्छिन उनी । छोरिलाइ मा’रि पो हाल्ने हो कि फा’ली पो हाल्ने हो कि भन्ने ड’र भएको बताउछिन उनि । क’ठै ती सानी छोरिहरु भने साइकल ल्याइदिनु है ममि भन्छिन । छोरिहरुलाइ घरमै बस्नु आफ्नो ख्याल राख्नु भन्दै सम्झाइन उनले । आफू चाडै आउने दि’ला’सा पनि दिइन उनले । कहिले फर्किन्छिन त उनी नेपाल?